Fiara Cable, mihetsiketsika any San Marino - San Marino
Eoropa San marino San marino
Adiresy adiresy: Piazzale Campo della Fiera, 10, San-Marino
Andraikitra: Borgo Maggiore sy Monte Titano
Ny saran'ny dia: 4.5 euros
Fialan-tsasatra: 15 minitra
Iray amin'ireo firenena kely indrindra, ary koa ny repoblika eoropeanina tranainy indrindra, San Marino dia toerana tena mahafinaritra ho an'ny mpizahatany maro. Raha ny marina, ny ohabolana "kely, eny, saro-kenatra" dia miasa tanteraka eto. Manintona mpizahatany an-tapitrisany isan-taona ny karazana zavakanto malaza sy ny architecture architecture. Eny, ny mandinika ireo hevi-dehibe rehetra amin'ny firenena madinika dia mora amin'ny avo indrindra amin'ny fiarandalan'i San Marino.
Ny fomba fiasa sy ny toetrany
Anaram-ponina hafa an'ny San Marino - "ilay tendrombohitra, nivadika ho repoblika" - dia mamaritra ny toetra mampiavaka ity firenena ity araka izay tratra. Sarotra be ny mandeha any amin'ny faritra be tendrombohitra amin'ny alàlan'ny fiara, ankoatra izany, voarara ao amin'ny foibe ara-tantara ihany koa. Aleo lazaina fa mbola manapa-kevitra ny hanofana fiara ianao. Amin'io tranga io, dia handoa vola be ianao hividy fiara ary hikarakarana azy io raha mahita toerana misy anao ianao. Noho izany, ny lampihazo any San Marino no tena fomba fitateram-bahoaka. Ankoatra izany, ity fiara ity miaraka amin'ny tady fantsona dia ampiasaina hitondra ny olona sy ny entana.
Ny endriky ny fitsangantsanganana amin'ny fiara fitaterana ao San Marino
Noho izany, raha manapa-kevitra ny hanao dia lavitra avy any an-drenivohitra ianao, ohatra, mankany amin'ny tanànan'i Borgo Maggiore na mankany Monte Titano , dia mila mandinika karazana lafiny lehibe amin'ny fiara fitaterana. Ny halavan'ny lalana dia iray kilaometatra sy sasany monja. Izany hoe, afaka mandeha any amin'ilay toerana ianao ao anatin'ny minitra vitsy monja. Ny fiara rehetra dia ny "1" na "2". Maro ireo mpizahatany izay nahita voalohany tany San Marino, matahotra ny ho tara ho an'ny fako. Aza manao izany, satria ny fiaran-dalamby dia mihazakazaka dimy ambin'ny folo minitra.
Ny endrika iray hafa amin'ny fiara fitaterana dia sary tsara tarehy iray izay misokatra amin'ny mason'ny vorona iray. Indrisy, ny fotoana laninao amin'ny rivotra dia tsy hamela anao hankafy ny fomba fijerin'ny firenena mandritra ny fotoana maharitra.
Saingy afaka mitsambikina fiara vitsivitsy ianao ary mijery ny fanjakana amin'ny toerana ambony ao amin'ny fiara fitaterana. Avy any dia hahita ny fiarovana an'i San Marino na ny tanàna-afovoan-tanàna, ireo mpitsidika lehibe indrindra ao amin'ny firenena sy ireo havoana malaza manodidina ny repoblika.
Any amin'ny gondola amin'ny rivotra
Ny zava-misy mahaliana momba an'i San Marino dia ny hoe ny sarety saribakoly dia antsoina hoe "gandols", toy ireo sambo nentin-drazana Venetiana.
Ny lalambe dia malaza amin'ny mpizahatany miteny rosiana amin'ny ririnina, mandritra ny fivarotana seza. Nafindrany haingana ny mpividy rehetra amin'ny fividianana avy any amin'ny faritra iray any amin'ny firenena hafa.
Maro amin'ireo mpizahatany miteny Rosiana no niteraka iray hafa mahaliana ny fiara fitaterana, sy ny manontolo an'i San Marino. Rehefa mividy tapakila ho an'ny funicular dia tsy hanana olana ianao, ary mety ho adino ny adihevitra amin'ny fiteny mandritra ny fotoana fohy. Ireo mpivarotra, izay matetika mifandray amin'ny mpizahatany, dia afaka manazava aminao amin'ny teny Rosiana ny habetsaky ny tapakila amin'ny saran-dalana.
Ny fandaniana sy ny fandaharam-potoana amin'ny fandefasana
Ny diany amin'ny fiara an-dalamby dia tena tsy lafo, € 4,5 mandroso. Eo akaikin'ny lampihazo dia misy fiara ho an'ny fiara. Ny sandan'ny fiara dia 1 € isaky ny ora. Azonao atao ny mijanona sy maimaimpoana maimaim-poana, eo amin'ny telon-jato metatra miala amin'ny fakana ambaratonga.
Ny fandaharam-potoan'ny fiara an-dalamby dia miankina amin'ny vanin-taona sy ny volana.
ny volana Janoary sy febroary ny lalana dia miainga amin'ny 7 hatramin'ny 18 ora eo ho eo 18.30;
tamin'ny Martsa nanomboka tamin'ny 7.50 hatramin'ny 19.00;
tamin'ny volana Aprily nanomboka teo amin'ny 7: 50 hatramin'ny 19: 30;
amin'ny volana Mey sy Jona hatramin'ny 7.50 hatramin'ny 20.00;
nanomboka tamin'ny 1 jolay ka hatramin'ny 5 septambra nanomboka tamin'ny 7.50 hatramin'ny 1.00;
nanomboka ny 6 septambra ka hatramin'ny 30 septambra nanomboka tamin'ny 7.50 hatramin'ny 20.00;
amin'ny volana Oktobra hatramin'ny 7 hatramin'ny 19 hatramin'ny 19.00;
tamin'ny Novambra - Desambra hatramin'ny 7.50 hatramin'ny 18.30.
Tsy misy ny fandaharam-potoana fialana amin'ny fiarandalan'ny fiara.
Miantsoa fiara any Madrid
Ny Vatican Pinakothek
Fiangonana Panagia Kanakaria
Ny dirak'i Lady Gaga avy any Rosia dia hilalao amin'ny vanim-potoana vaovao an'ny "The Games of Thrones"
Tovolahy ilay Dane Lehibe
Inona no fandrika ary inona no "mihinana"?
Fanafody fanala - inona no zava-mahadomelina?
Fitsaboana ny alkaola ao an-trano
Ny fitondran'ny andron'ny zaza ao anatin'ny 8 volana
Nidina tao an-trano ilay angidina - famantarana
Biparietal ny lohan'ny foetal
Sinusitis mitaiza - fitsaboana
Ny fanesorana ny tranonjaza dia miteraka
Nick Jonas sy Olivia Kalpo
Ahoana no hanamboarana kebab shish?
Chuck-chak - recipe
Pancreatitis mahery - soritr'aretina sy fitsaboana
Inona no tokony homeny tovovavy, mba hahagaga azy?
Miakanjo toy ny 50 taona
Kitapo misy fofona